Cali Guudlaawe oo tagaya Beledweyne iyo Siyaasiyiin & Xildhibaano oo kulamo ka bilaabay Magaalada. | Warbaahinta Ayaamaha
Cali Guudlaawe oo tagaya Beledweyne iyo Siyaasiyiin & Xildhibaano oo kulamo ka bilaabay Magaalada.
BELEDWEYENE-AYAAMAHA-Xalay waxaa Kulan Albaabada ay u xiran yihiin Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Beledweyne ku yeeshay Madaxweynihii hore ee HirShabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble Siyaasiyiin kala duwan iyo Xildhibaano kamid ah Baarlamaanka 10-aad ee waqtigooda dhammaaday oo shalay gaaray magaalada Beledweyne.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Cali Guudlaawe Madaxweynaha HirShabeelle ay u badan tahay in Senatarada HirShabeelle gaar ahaan kuwa reer Hiiraaraan uu halkaas kusoo qori doono kadib markii laga hesho tabashada reer Hiiraan gaar ahaan Beesha Xawaadle.
Xildhibaanada iyo masuuliyinta tagay Beledweyne ayaa qaarkood waxay hami ka leeyihiin xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka inay kala heshiiyaan Cali guudlaawe, dhanka kalena Cali Guudlaawe lageeyo Beledweyne oo muddo ku dhow sanad uusan tagin tan ilaa doorashadiisa.